IZIZI D-LINK DIR-300 REV. B7 BEELINE - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ịhazi DIR-300 NRU B7 maka Beeline
Ekwadoro m iji ntuziaka ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ maka ịgbanwe agbanwe ngwa na ịtọlite ​​router Wi-Fi iji rụọ ọrụ dị mma na Beeline Go
Ọ bụrụ na ị nwere onye ọ bụla nke D-Link, Asus, Zyxel ma ọ bụ TP-Link ndị na-eme njem, na onye na-eweta Beeline, Rostelecom, Dom.ru ma ọ bụ TTC ma ọ dịtụbeghị mgbe ị họpụtara Wi-Fi routers, jiri ndụmọdụ Wi-Fi mmekọrịta a.
Hụkwa: Ịhazi Ndazi DIR-300 D-Link
Onye na-eweta Wi-Fi D-Link DIR-300 NRU rev. B7
Ụbọchị ole na ole gara aga ọ ga-ekwe omume ịhazi ọhụrụ WiFi rawụta D-Link DIR-300 NRU rev. B7, ọ dịghị nsogbu na nke a, n'ozuzu ya, ebilighị. Ya mere, anyị ga-atụle otú ị ga-esi hazizi onye rawụta a. N'agbanyeghị eziokwu ahụ D-njikọ gbanwere kpamkpam ihe e ji emepụta ngwaọrụ ahụ, nke agbanwebeghị ruo ọtụtụ afọ, njikwa na ntanetị nke tincture na-emegharị ntụgharị nke abụọ nyochaa ugboro abụọ site na ntanetị malite na 1.3.0 ma na-agwụ na nke ikpeazụ taa - 1.4.1. Nke dị mkpa, na m chere, mgbanwe na B7 - nke a bụ enweghị mpepụ mpụ - amaghị m otú nke a ga-esi emetụta àgwà nke ikuku / nnyefe. DIR-300 na enweghị ike mgbaàmà zuru ezu. Ọfọn, ọ dị mma, oge ga-agwa. Ya mere, gaa na isiokwu - otu esi hazie onye router DIR-300 B7 iji rụọ ọrụ na Bealer.
Hụkwa: Nhazi asụsụ DIR-300
Njikọ DIR-300 B7
Onye na-eweta Wi-Fi D-Link DIR-300 NRU rev. B7 n'azụ anya
Ngwaọrụ ọhụrụ na onye na-enweghị ike jikọtara ya dị ka ndị a: anyị jikọọ eriri USB (na ikpe anyị, Beeline) gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri na azụ nke onye na-ahụ maka ihe ntanetị, na Intanet. Tinye eriri na-acha anụnụ anụnụ na otu njedebe anyị na-agbanye n'ime ebe anọ fọdụrụ nke router, nke ọzọ n'ime njikọ nke kaadị netwọk nke kọmputa gị. Anyị na-ejikọta ike na router ma na-eche ka ọ buo, na kọmputa ga-ekpebi njedebe nke njikọ netwọk ọhụrụ (n'ọnọdụ a, ya ejula gị anya na ọ bụ "oke" na ihe dị mkpa).
Rịba ama: n'oge setịpụrụ ihe ntanetịja, anaghị eji njikọ Beeline nwere na kọmputa gị iji nweta Ịntanetị. Ọ ghaghị nkwarụ. N'ikpeazụ, mgbe ịmechara onye na-agbanyụ redio, ọ dịkwaghị mkpa - onye ntanetị ga-eme ka njikọ ahụ guzosie ike.
Ọ dịkwa mma ijide n'aka na ntọala njikọ mpaghara mpaghara maka IPV4 protocol na-edozi: iji nata adreesị IP na adreesị ihe nkesa DNS na-akpaghị aka. Iji mee nke a, na Windows 7, pịa akara ngosi njikọ na ala aka nri, họrọ "Network and Sharing Center", wee gbanwee ntọala nkwụnye ọkụ, pịa aka na "Njikọ njikọ netwọk mpaghara, ma hụ na e nweghị ma ọ bụ adreesị sticking Na Windows XP, a nwere ike ịhụ ihe ndị a na Ogwe njikwa - njikọ netwọk. O yiri ka isi ihe mere ihe nwere ike esi ghara ịrụ ọrụ, echetara m ya.
Njikọ njikọ na DIR-300 rev. B7
Nzọụkwụ mbụ iji hazie L2TP (iji usoro a bụ Beeline) na D-Link DIR-300 bụ ịmepụta nchọgharị Ịntanetị kachasị amasị gị (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari na Mac OS X, wdg.) Wee gaa 192.168.0.1 (anyị na-abanye adreesị a na ntinye aka nke ihe nchọgharị ma pịa tinye). N'ihi ya, anyị kwesịrị ịhụ nbanye na paswọọdụ arịrịọ iji banye nchịkọta nke nchịkwa DIR-300 B7.
Nbanye na paswọọdụ maka DIR-300 rev. B7
Nbanye ndabara bụ admin, paswọọdụ bụ otu. Ọ bụrụ na ihe kpatara ya anaghị adabara, ma eleghị anya, gị ma ọ bụ onye ọzọ gbanwere ha. Na nke a, ịnwere ike ịtọgharịa redio na ntọala ntọala. Iji mee nke a, pịa ma jigide ihe dị mkpa (M na-eji nrịịpị) maka 5 sekọndị bọtịnụ RESET na azụ nke router. Ma kwuzie ihe mbu.
Mgbe ịbanye na nbanye na paswọọdụ, anyị ga-abanye na nchịkọta ntọala nke redirect D-Link DIR-300. B7. (O di nwute, enweghi m ike inweta nke a na ntinye ihe a, ya mere na ntaneta ihuenyo enwere nchikota nke ntughari nke mbu.
D-Link DIR-300 rev. B7 - nchịkọta panel
N'ebe a, anyị ga-ahọrọ "Hazie aka", mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ahụ otu ibe nke ihe ntanetị Wi-Fi, ntanetị arụmọrụ na ozi ndị ọzọ ga-egosipụta.
Ozi banyere onye na-agbanye redire DIR-300 B7
Na top menu, họrọ "Network" wee banye ndepụta nke njikọ WAN.
Na oyiyi dị n'elu, ndepụta a anaghị efu. I nwere otu ihe ahụ, ọ bụrụ na ị zụrụ onye rawụta, otu njikọ ga-enwe. Elela ya anya (ọ ga-apụ mgbe ọ ga-esote nzọụkwụ ọzọ) wee pịa "Tinye" na ala aka ekpe.
Nhazi nke njikọ L2TP na D-Link DIR-300 NRU rev. B7
Na "Njikọ Ụdị", họrọ "L2TP + Dynamic IP". Mgbe ahụ, kama nke aha njikọ aha, ị nwere ike ịbanye ọ bụla ọzọ (dịka ọmụmaatụ, enwere m beeline), tinye aha njirimara gị site na Beetel Internet na "Aha njirimara", tinye paswọọdụ wee kwenye paswọọdụ na mpaghara, nke ọ bụla, Beeline password. Adreesị adreesị VPN maka Beeline bụ tp.internet.beeline.ru. Tinye akọrọ na Nọgide Ndụ ma pịa "Chekwa." Na peeji na-esonụ, ebe a ga-egosipụta njikọ ọhụrụ ahụ, a ga-enye anyị ọzọ iji chekwaa nhazi ahụ. Anyị na-echekwa.
Ugbu a, ọ bụrụ na arụrụ ọrụ niile dị n'elu, n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụrụ na ihieghị na ịbanye na njikọ njikọ, mgbe ị ga-aga na "Ọnọdụ" taabụ, ị ga-ahụ foto na-esonụ:
DIR-300 B7 - foto na-enye ọṅụ
Ọ bụrụ na njikọ atọ niile na-arụsi ọrụ ike, mgbe ahụ, nke a na-egosi na ihe kachasị mkpa bụ ịhazi Ndaghachi D-Link DIR-300 NRU. B7 anyị arụchaala nke ọma, ma nwee ike ịga n'ihu na nzọụkwụ ọzọ.
Ịhazi njikọ WI-FI DIR-300 NRU B7
N'ikpeazụ, ịnwere ike iji njikọ njikọ Wi-Fi ozugbo ịgbanwụrụ router na netwọk, mana n'ọtụtụ ikpe, ọ bara uru iji hazie ụfọdụ n'ime ya, karịsịa, iji debe paswọọdụ na ebe Wi-Fi ka ndị agbataobi ghara iji Intanet gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị chọghị ịma, ọ nwere ike imetụta ọsọ nke netwọk, na "brakes" mgbe ị na-arụ ọrụ n'Ịntanet, o yikarịrị ka ọ gaghị adịrị gị mma. Gaa na taabụ Wi-Fi, isi ntọala. N'ebe a, ị nwere ike ịtọ aha ebe ntinye (SSID), ọ nwere ike ịbụ nke ọ bụla, ọ bụ na-achọsi ike iji mkpụrụedemede Latịn. Mgbe emechara nke a, pịa dezie.
Ntọala WiFi - SSID
Ugbu a gaa na taabụ "Ntọala Nche". N'ebe a, ị ga-ahọrọ ụdị nyocha nke netwọk (ọkacha mma WPA2-PSK, dịka na foto) ma debe paswọọdụ gị na ebe WiFi - leta na nọmba, ọ dịkarịa ala 8. Pịa "Change". Emeela. Ugbu a ị nwere ike jikọọ na ebe Wi-Fi site na ngwaọrụ ọ bụla nwere nkwukọrịta nkwurịta okwu kwesịrị ekwesị - ọ bụ laptọọpụ, smartphone, tablet ma ọ bụ Smart TV.MGBE: Ọ bụrụ na ọghị arụ ọrụ, gbalịa gbanwee adreesị LAN na 192.168.1.1 na ntọala - netwọk - LAN
Ihe ị chọrọ ịrụ na TV si Beeline
Iji nweta IPTV site na Beeline, gaa na peeji nke mbụ nke ntọala DIR-300 NRU rev. B7 (maka nke a, ịnwere ike pịa akara D-Link na aka ekpe aka ekpe) ma họta "Hazie IPTV"
Nyocha IPTV D-Link DIR-300 NRU rev. B7
Mgbe ahụ ihe niile dị mfe: họrọ ọdụ ụgbọ mmiri ebe igbe Beeline ga-ejikọta ya. Pịa mgbanwe. Echefukwala ijikọta igbe set-top gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri a kapịrị ọnụ.
Na nke a, ma eleghị anya, ihe niile. Ọ bụrụ na i nwere ajụjụ - dee ihe ndị a, M ga-anwa ịza ajụjụ niile.